“केपी ओलीले कालापानी फिर्ता गरे आजी वन ओलीको जु`त्ता पा`लिस गरेर `ब`स्छु`” : कांग्रेसका नेता सिंह ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/“केपी ओलीले कालापानी फिर्ता गरे आजी वन ओलीको जु`त्ता पा`लिस गरेर `ब`स्छु`” : कांग्रेसका नेता सिंह !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कां`ग्रेसका नेता तथा सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याए आफू आजिवन ओलीको जुत्ता पालिस गरेर बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
आज राति ८ः०० बजे प्राईम टाईम्स टेलि`भिजन बाट प्रशा`रण हुने कार्यक्रम जनता जान्न चाह`न्छनमा पत्रकार ऋ`षि धमला सँग कुरा गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।उनले भनेका छन्,’यो कुनै हाल`तमा फिर्ता आउँदैन् । के`पी ओ`लीले नै चाहेका छैनन् । यो उनको उग्र राष्ट्र`वाद हो ।
यस्तो राष्ट्रवा`दले केही हुनेवाला छैन् । केपी ओलीभन्दा बढि राष्ट्र`वादी म हुँ। बहस गरौं । ओली लाई बो`लाउनु होस मेरो अघि ।’ उनले केपी ओलीले प्रधा`नमन्त्री हुनु अघि थाई`ल्याण्डको बैंक`कमा भाज`पा नेता राममा`धवसँग सम्झौता गरेको र उनले हिन्द`राष्ट्र नेपाल बनाउँछु भनेर एग्रि मेन्ट गरेको पनि सनसनीपूर्ण आक्षेप लगाएका छन् ।
उनले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब प्रधान मन्त्री नबन्ने ठोकुवा गरे । उनका अनुसार र्वतमान ओली, कांग्रेस सभा`पति शेरब`हादुर देउवा र प्रचण्ड तीनै जना असफल भैसकेका छन् । ओली, देउवा र दाहालको नेतृत्वमा मुलुक अघि बढ्न नसक्ने सिंहको दाबी छ ।
सरकारले नक्सा सबन्धी अघि बढाएको संविधान संशोधन विद्य`येयकमा आफूहरुले निशर्त मतदान गर्नेपनि विश्वास दिलाए । तर, कांग्रेसले अघि बढा`एको गैर`सरकारी विद्ये`यकमा पनि ओलीले मतदान गर्नुपर्ने उनको शर्त छ । उनले भने,’त्यसको ग्यारेन्टी देउवाले पनि दिनुपर्छ ।’
सिंहले नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढि`सकेको र अब विस्तारै उसले नेपालमा प्रभाव जमाउने टिप्पणी गरेका छन् । उनले अब नेपालमा सेना र अदालतको सक्रियता बढ्ने पनि दाबी गरे । उनले भने,’सेना र अदालतको ई`न्ट्रेष्टमा नयाँ शक्ति जन्मिन्छ । र, त्यही श`क्तिले देशमा शासन चलाउँछ ।’ श्रोत: रिपोटर्सनेपाल
राजनीतिमा अपराधीकरणको गन्ध !!!
मृ`त्यु सँग लडिरहेका कलाकार अनुपमको उपचारमा पैसाको अभाव, सोनुले गर्ने भए सहयोग